Libaaxley waa Baabul mandabka isgaadhsiinta S/Land + Somalia
Sunday January 08, 2017 - 16:14:54 in Maqaallo by XA_Wararka Caynaba News
Libaaxley waa Baabul mandabka isgaadhsiinta S/Land + Somalia waxbase uguma fila Deg.Boon ee libaaxley ka tarisantahay. Dr.khadar-Libaaxley.
MUCDA: biraha buuraha libaaxley u dul yaala dhamaan shirkadaha bixiya adeegyada badan ee kala duwan ee bulshada nolosha u fududeeyay . biraha buuraha libaaxley shirkadaha u saaran Silsilada buuraha libaaxley waa ( baabul mandabka isgaadhsiinta somaliland + puntland + somalia)
waa bar u-nuga guusha macaashka hantida badan, daaraha dhaadheer ee magaalo walba ka dhisan iyo hindisaha laaca guulaha mustaqalka dhaw iyo ka fogba.
1. dhisme cusbitaal oo degmada boon u baahantahey.
2. Gaadhi ambalaas ah oo loogu adeego dhawr iyo tobbanka tuulo ee hoos yimada degmada boon oo dhamaantood ku wareegsan qorfaha silsilada buuraha libaaxley.
3. Dhismaha iskuulka farsamada gacanta iyo qalabkiisii oo ay wax ku bartaan reer boon.
4. Dhismaha saldhiga booliska degmada boon.
5. Dhismaha sariibad iyo saylad xoolaad.
6. Dayr lagu soo wareejiyo dugsiyada hoose/dhexe iyo dugsiga sare.
7. Dhismaha garoonka kubada cagta .
8. Dhismaha 2 qol iyo suuli loo sameeyo ciidanka istabta magaalada boon jooga.